हारेकाहरुको बिजय उत्सब, उछिनेकालाई गाली, जीतेकालाई चुनौति ~ Aaha Sanchar
हारेकाहरुको बिजय उत्सब, उछिनेकालाई गाली, जीतेकालाई चुनौति
4:59:00 AM www.aahasanchar.com No comments
शिर्षक देख्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । यो ब्लगरले के झुर शिर्षक राखेको यार, हारेकाहरुले पनि कहि बिजय उत्सब बनाउने र आफ्ना कार्यकर्ताहरु खेरेर बजारमा ¥याली निकाल्लान त ? तपाई अचम्म नमान्नुहोस कहिलेकाँहि हारेकाहरुको पनि दिन आउदो रैछ । धेरैले त हिजो बेलुका रुकुम सदरमुकाममा देखिहाल्नु भयो होला । हिजो नदेखेको भए यहाँ पढ्नुहोस, हिजो बेलुका नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन रुकुमले विजयउत्सव मनायो । बिजय उत्सवको अवसरमा नेकपा एमाले रुकुमको जिल्ला पार्टी कार्यालयबाट ¥याली सुरु गरि त्रिबेणी चोक, पुष्पलाल चोक, मिडिया चोक, माथिल्लो बजार हुँदै कालिका स्थानमा गएर कोण सभामा परिणत भएको थियो । केहि दिन अघि भएको नेपाली निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यनियन निर्बाचनमा एमाले निकट उक्त कर्मचारी संगठनले रुकुममा सोचेको भन्दा कम मत प्राप्त गरेर तेस्रो भयो । चुनाबमा कांगेस निकट कर्मचारी संगठन पहिलो र माओबादी केन्द्र निकट कर्मचारी दोस्रो भए । तर यो बिजय उत्सब भने रुकुमको थिएन मात्र रुकुममा मनाईएको थियो । केन्द्रिय स्तरमा एमाले निकटका कर्मचारी संगठनले अन्य काग्रेस, माओबादी निकट संगठनलाई नराम्ररी पछारेपछिको बिजय उत्सब थियो । रुकुमममा हारेपनि केन्द्रबाट अरु संगठनलाई नराम्ररी पछारेपछि लाज छोप्ने उनीहरुका लागि गतितै मौका मिलेको हो ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन रुकुमका अध्यक्ष ताराप्रकाश पुन, संगठनका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानुकुमार शर्मा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रुकुमका अध्यक्ष संगम के.सी, पेशागत महासंघ रुकुमका अध्यक्ष दिपक बिष्टले ¥याली पछिको कोण सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । यस सम्बन्धी थप समाचार यहाँ क्लिक गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ । अचम्मको कुरा एउटा ब्यानर पनि प्रिन्ट गरिएको थियो त्यसमा आफ्नो कर्मचारी संगठनले जीतेको केन्द्रको कुरा मात्र लेखिएको थियो रुकुम चुनाब बिषयको रु समेत उल्लेख गरिएको थिएन त्यसमा ।
हेर्नुहोस तस्बिर केहि देख्नुहुन्छ रुकुमको चुनाब परिणामको कुरो
अर्को कुरा रुकुममा माओबादी निकट कर्मचारीहरुले उनीहरुलाई जीतेका थिए तर उनीहरु बारम्बार दुई ओटा बिभागमा मात्र जीतेको प्रसंग कार्यक्रममा उठाएर हाँस्दै यस्ता पनि कहि कर्मचारी संगठन हुन्छन त साथीहरु भन्दै गालि गरेका थिए । त्यस्तै रुकुममा पहिलो हुने काग्रेस निकट कर्मचारीहरुलाई पनि दरै कुरा दिएका थिए । उनीहरु भन्दै थिए रुकुममा जीतेर के गर्ने बिजय उत्सव निकाल्ने तिमीहरुको तागत छर ? तिमीहरुलाई भोट हाल्ने कर्मचारीहरु त दहिचिउरे हुन, हाम्रो जस्तो अडिग कर्मचारी तिमीहरुका छैनन क्यारे, सडकमा देखाउ न ।
मलाई मात्र लागेको होईन हेर्नुहोस फेसबुकमा पनि स्टाटस मेरो ब्लग भन्दा पहिले नै आईसकेको रैछ ।
रुकुममा भएको आधिकारी ट्रेड युनियनको बिस्तृत समाचार पढ्न यहाँ वा तलको शिर्षकमा क्लिक गर्नुहोस ।
कम्युनिष्ट गढ रुकुममा काँग्रेस विजयी